Mampivelatra ny fiaraha-miasany amin’ny firenen’i Amerika afovoany i Maraoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2018 11:22 GMT
Boulevard Mohamed V ao Rabat avy amin'i Nawal Bennani CC License 3.0
Lahatsoratr'i Mohamed Sarraf, mpanoratra nasaina ary nahitsin'ny Global Voices
Ao Maraoka, voamariky ny soniam-pifanarahana iraisampirenena maro ny taona 2018. Ao amin'ny birao foiben'ny ADII, ao Rabat i Nabyl Lakhdar tamin'ny 9 jolay lasa teo no nihaona tamin'i Rita Maria Zniber, filohan'ny fikambanana mpamokatra voaloboka ao Maraoka, hanomana fifanarahana lasitra. Ity farany ity no ahafahan'ireto mpiara-miombon'antoka anankiroa ireto mametraka hetsika maro iaraha-manao sy voarindra, fanarahana akaiky ny fandroson'ny tetikasa sy fanatsarana ny tontolom-pombafomba, ara-dalàna sy ara-pitsarana ireo orinasa eo amin'ny sehatrasan'ny voaloboka maraokana.
Tamin'ny 10 jolay indray dia anjaran'ny delegasiona parlemantera amerikana afovoany, izay nanao fitsidihana tamin'ny fomba ofisialy an'i Maraoka, no noraisin'i Nabyl Lakhdar teo anivon'ny ADII. Niresaka ireo lalana rehetra azo aleha ho amin'ny fampivelarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny fadintseranana maraokana sy ireo firenena mandrafitra ny Parlacen (Honduras, Goatemalà, Repoblika Dominikana, Nicaragoà, Salvador) i Anselmo Otoniel Navarro Gonzales, filohan'ny vaomieran'ny fifandraisana amin'ny any ivelany sy ny raharaham-pifindramonina eo anivon'ny parlemanta amerikana afovoany (na Parlacen).
Ny tanjona dia ny hanatsarana ny servisim-padintseranana ho tandroka aron'ny vozon'ny tetipanorom-pampandrosoana an'i Maraoka. Eny tokoa, ho aondrana any amin'ny firenen'i Parlacen ireo fanandramana nahomby teo amin'ny sehatry ny fadintseranana nomerika sy ny fampiofanana (indrindra teo amin'ireo hetsika sahisahy mety ahitan-doza). Dingana voalohany amin'ireo maro hanaraka, manomboka izao ka mandra-piafaran'ny fanavaozana izay kendrena ho ao anatin'ny telo taona.
Ao anatin'ireo fifampitohizan'hetsika izay efa hita ny fahombiazany ao anatin'izao fanitsian-drafitra izao ny rafitra fanasoana marika ara-ketra SAMID (manondro ny « Système Automatisé de Marquage Intégré en Douane »), izay efa nampiharina hatramin'ny taona 2010, indrindra tao Tanger Med. Nampiasaina eo noho eo sy avy lavitra, io no ahafahana mamantatra ny lasitra tokony andoavan-ketra amin'ny anarana Taxe Intérieure de Consommation (na TIC na Hetram-panjifana anatiny) ampiharina amin'ny zava-pisotro sy ny voka-paraky avy amin'orinasa, na nohafarana izany na azo tao an-toerana, tao amin'ny firenena. Rafitra novolavolain'ny orinasa soisa SICPA ary ahafahana manisy marika ireo vokatra ireo sy manavaka azy amin'ny hosoka na natao risoriso na naondrana an-tsokosoko. Tsy izay ihany no fanovana nampiharina tamin'ny fanitsian'ny taona 2010. Norafetin'ny sampandraharahan'ny fadintseranana ihany koa ireo toeram-pisavana isan-karazany, tamin'ny fifotorana tamin'ny fanadihadiana ny fifehezana izay mety hampidi-doza, alohan'ny fanalàna ny fadintseranan'ireo entana sy mandritra ny fanaraha-maso eo noho eo ireo entana ireo.
Najoro ny birao misahana manokana ny fijerena ireo asa mety ahitan-doza, narahina fiofanana matanjaka, ary nohamafisina ny fanaraha-maso, indrindra fa tamin'ny fandrindrana ireo servisy isan-karazany (Fadintseranana, Birao fanakalozam-bola vahiny sy fadintseranana ary ny fitantanana ankapoben'ny hetra) mba ahafahana manatontosa ireo asam-panamarinana any amin'ny orinasa. Ary tsy niandrasana ela ny vokatra, fa nitombo avo roa heny ny entana azo tanelanelan'ny taona 2016 sy 2017, izay nahatratra dimy tapitrisa. Iadian'ny Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII na Fitantanan'ny Fadintseranana sy ny Hetra Tsy Mivantana) ihany koa ny fanondranana devizy, zavamahadomelina sy sigara, ny fanadiovam-bola ary nihamaro ihany koa ny fanaraha-maso ny mpandeha.
Fa mbola tsy ampy izany ho an'i Nabyl Lakhdar, tale jeneralin'ny ADII hatramin'ny novambra 2017 ary efa niasa teo tanelanelan'ny taona 1998 sy 2015. Izy no niavian'ny rafitra an-tserasera Badr izay manaisotra ao amin'ny fadintseranana ny entambarotr'i Maraoka haondrana sy nohafarana, ary nanapa-kevitra izy hanavao bebe kokoa ny servisin'ny fadintseranana, izay efa nananany drafitra sahisahy nokendrena haharitra hatramin'ny taona 2021.
Ny tanjona ? Tsy fileferana mihitsy amin'ny fanaovana risoriso sy fampivelarana fifanarahana iraisampirenena mafy kokoa.